Iindaba - Isikhokelo esifutshane kumalaphu eAntistatic
Ukutyhubela iminyaka ndiye ndacelwa ukuba amalaphu ethu achasene no-static, conductive, okanye dissipative. Lo inokuba ngumbuzo onzima ofuna ikhosi emfutshane kubunjineli bombane. Kwabo bethu ngaphandle kwelo xesha longezelelekileyo sibhale eli nqaku lebhlog ngumzamo wokuthatha enye yemfihlakalo kumbane ombane kunye neendlela zokuwulawula kumalaphu.
Ukuqonda umohluko phakathi kwe-antistatic, dissipative kunye ne-conductive njengoko inxulumene nombane kunye namalaphu kufuneka uqale uqonde umahluko phakathi kwemigaqo yokugquma kunye nokuqhuba njengoko inxulumene nombane, ke masiqale ngezinye iinkcazo
Abaqhubi zizinto okanye iintlobo zezinto ezivumela ukuhamba kweentlawulo zombane kwicala elinye okanye nangaphezulu. Izinyithi ziqhuba ngokukodwa kwaye yiyo loo nto zisetyenziselwa ukuhambisa umbane kwindlu yakho yonke ngohlobo lweentambo zombane, umzekelo. I-insulators zichasene nabaqhubi kuba zizinto apho umbane ungahambi ngokukhululekileyo, kwaye ke oko kunciphisa ukuhamba kombane.
Ukubuyela kumzekelo wocingo lombane, ngelixa umbane uhamba kakuhle ngesinyithi awuhambi kakuhle nge-PVC kunye nephepha elisetyenziselwa ukusonga ucingo lombane. I-insulators kwintambo yolwandiso, i-PVC kunye nephepha, kuthintela ukuba intlawulo ingadluli kubo ikuvumela ukuba ubambe intambo ungothuki.
Ngokubanzi i-PVC yenzela i-insulator elungileyo, kodwa kukho izinto ezinokwenziwa ukwenza ukuba i-PVC yenjineli eyolukiweyo iqhube ngakumbi. Inqanaba lokukhohlisa kwimathiriyeli ukutshintsha iipropathi eziqhubayo ziya kuyibeka kulwahlulo lube zithathu; i-antistatic, static dissipative, okanye iqhuba.
Ngokwe-MIL-HDBK-773A DOD Handbook nazi ezi nkcazo zilandelayo zokwahlulahlula zintathu:
I-Antistatic -Ibhekisa kwipropathi yezinto ezinqanda i-triboelectic effects. Intlawulo ye-Triboelectric ngumbane ongashukumiyo.
I-Static Dissipative -Izinto eziya kuthi zitshabalalise ngokukhawuleza iirhafu zombane ngaphezulu komphezulu okanye ivolumu, zibe noluhlu lokuchasana phakathi kokuhamba kunye nokuthintela.
Ukuqhuba -Izixhobo ezichazwe njengomphezulu okanye ivolyum conductive. Ezo zinto zinokuba sisinyithi okanye zifakwe kwisinyithi, amasuntswana ekhabhoni, okanye ezinye izinto ezenziwayo okanye umphezulu wazo uphathwe ngezinto ezinjalo ngenkqubo yokufaka lacquering, ukutyabeka, ukwenza isinyithi okanye ukushicilela.
Ukujonga ukuba ngaba izinto ziyahlangabezana nenye yezi zigaba zintathu kukho uvavanyo olunokwenziwa ukulinganisa ubungqingqwa bomhlaba obulinganiswa nge-ohms / isikwere. Apha ngezantsi kukho igrafu ecwangcisa ukwahlula ngokusekwe kumanqanaba okumelana nomphezulu.
Xa uyila isisombululo sakho semveliso kuya kufuneka ukuba umisele ukuba yeyiphi inqanaba lokuqhutywa kwesicelo esiya kufuna. Kubalulekile ukuba uqonde iimfuno zesicelo esithile kwaye xa ujongene neenjineli okanye abayili kuya kuba ngcono ukubuza inqanaba le-Ohms abayifunayo.